Hurumende Yonyima Vakoti Mari yeMuhoro Uye Kumisa Vamwe Basa
Mutungamiri wesangano ravakoti reZimbabwe Nurses Association, VaEnoch Dongo, vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa nehurumende kuti vakoti havasi kuda kushanda asi kuti izano rayaruka rekuda kuvandudza mashandiro avo.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvehutano, VaConstantino Chiwenga, vanoti vave kuda kuti vamwe vakoti vabairwe zvitupa asi vamwe vachishanda vomiswa chero nguva.
Kunyangwe nyika iri pakati pekurwisa chirwere cheCovid-19, zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende musina mishonga uye vashandi vanogara vachiramwa mabasa.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota nezuro rakati vanamukoti vanodarika churu nemazana maviri nemakumi masere kana kuti 1, 280 vakatadza kuuya kubasa kwemazuva mashanu vachiti vanoda kushanda mazuva maviri zvichienderana nemari dzavari kutambira vachamiswa pamberi pedare richavaranga.
Vanoti hurumende iri kuronga kuunza kuzvipatara zvikuru vakoti kubva kuzvipatara zvemauto.Sachigaro weHealth Services Board, Dr Paulinus Sikosana, vanoti vakatotora danho rekuregedza kubhadhara vakoti churu nemakumi matatu nevaviri mari yemuhoro.
Vamwe vakoti kuzvipatara zvakaita seUnited Bulawayo Hospitals, Sally Mugabe Hospital neParirenyatwa vatopihwa matsamba ekuvamisa basa vakamirira kutongwa.